Kpido: cta | Martech Zone
Anyị na-enye ndụmọdụ banyere CTA mgbe niile ebe a n'ihi na ha dị oke mkpa maka ịga nke ọma. Enwere ike ịnwa gị iche na ịchọghị ha - na atụmanya ga-eme njem ọzọ n'ihi na ọdịnaya gị dị mma. Ọ dị m ka ya bụrụ na ọ mere otu ahụ mana, ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ ga-apụ. Ha nwere ike ịhapụ n'ike mmụọ nsọ ma mụta ihe ole na ole… ma ha ka na-ahapụ. Anyị ekeela ihe ndị bụ isi